laxmi bank limited(laxmi bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
लक्ष्मी बैंकको खुद नाफा २४.७६%ले बढ्यो, ईपीएस रु. १८.४१
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा प्रगति गरेको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले २४.७६ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको छ । बैंकले यो अवधिसम्म ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ७२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
लक्ष्मी बैंकको प्रायोजनमा महिला उद्यमी सम्मेलन अर्को साता
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको प्रायोजनमा यही माघ १२ गते छैटौँ महिलाउद्यमी सम्मेलन २०२० काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटेलमा हुने भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरमको यो सिग्नेचर कार्यक्रम कनेक्ट, कोलाबोरेट र क्रियट भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिँदैछ । कार्यक्रमको प्लाटिनम स्पोनसर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन रहेको छ । जसले महिला...
भुक्तानी सेवा प्रवर्धन गर्न लक्ष्मी बैंक र सेलपेबीच सहकार्य
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आफ्ना सबै ग्राहकमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलपेसँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्य सम्झौतामा बैंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत जीवनप्रकाश लिम्बु र सेलकम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।...
लक्ष्मी बैंकका सेयरधनीले पाउने भए १५% लाभांश
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्ना सेयरधनीर्ला १५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयरर ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित भएसँगै बैंकको चुक्तापूँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ...
लक्ष्मी र सिभिल बैंकको वार्षिक साधारणसभा आज, पारित हुँदैछन् यी अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंक लिमिटेडको आज आइतबार वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । लक्ष्मी बैंकको १९ औँ र सिभिल बैंकको नवौँ वार्षिक साधारणसभा हुन लागेको हो । लक्ष्मी बैंकको वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयरधनीलाई वितरण गर्ने भनी बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्तावको कुल १५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । बैंकले...
लक्ष्मी बैंकले शुरु गर्यो ‘ग्रिटिङ्स फ्रर्म लक्ष्मी’, नेपालकै पहिलो एनिमेटेड भाइबर–स्टिकर प्याक
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले भाइबर च्याटमा कुराकानीलाई अझ बढी रोमाञ्चक बनाउने उद्देश्यका साथ २०७६ मंसिर २३ गतेदेखि भाइबरमा १६ प्रकारको स्टिकर रहेको स्टिकर सेटको शुभारम्भ गरेको छ । यसबाट भाइबरमा यसभन्दा अघि नभएको ‘नेपाली एनिमेटेड प्याक’ शुरु गर्ने लक्ष्मी बैंक नेपालकै पहिलो बनेको छ। भाइबरमा स्टिकरहरु एक रमाइलो एवं रंगीनअ...
लक्ष्मी बैंकको १२० औँ शाखा झापाको काँकडभिट्टामा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२० औँ शाखा झापाको काँकडभिट्टामा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको...
मुक्तिनाथ, लक्ष्मी र सिभिल बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ । तीनवटै बैंकले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि सोमबारदेखि बुक क्लोज गर्दैछन् । यसको मतलब आजसम्म कायम हुने सेयरधनीहरुमात्र लाभांशको भागिदा र साधारणसभामा भाग लिन...
लक्ष्मी बैंकको वार्षिक साधारणसभा पुस ६ गते, लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । लाभांश पारित गर्ने मुख्य अजेन्डासहित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो पुस ६ गते (डिसेम्बर २२) मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयरधनीलाई वितरण गर्ने भनी बैंकको सञ्चालक समितिले...
लक्ष्मी बैंकको कपिलवस्तुमा दुई शाखा थप
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा कपिलवस्तु जिल्लामा थप दुई शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो ११८ औँ र ११९ औँ शाखा क्रमशः कपिलवस्तुको गोरुसिङे र पकडीमा सञ्चालनमा ल्याएकोे हो । यीे शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु...
लक्ष्मी बैंकको ११७औँ शाखा सुर्खेतको छिञ्चुमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ११७ औँ शाखा सुर्खेतको छिञ्चुमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखा मार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यो नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी...
लक्ष्मी बैंकको ११७ औँ शाखा सुर्खेतको छिञ्चुमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ११७ औँ शाखा सुर्खेतको छिञ्चुमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकको...
लक्ष्मी बैंकको खुद नाफा ३२.६४%ले बढ्यो, ईपीएस रु. १८.०२
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा ३२.६४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले खुद नाफा ४० करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्ष यही अवधिमा ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको समीक्षा अवधिमा सञ्चालन...
लक्ष्मी बैंकले बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक र तिलगंगा आँखा अस्पतालबीच बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सरको पहिचान र उपचारका लागि सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाह तथा अस्पतालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिता गुरुङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौत अनुसार बैंकले आफ्नो संस्थागत...
लक्ष्मी बैंक खुल्ला गल्फ प्रतियोगिता शनिबारदेखि
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले ग्लेनिगलमा डिजाइन गरिएको गोकर्ण गोल्फ क्लबमा “लक्ष्मी बैंक खुल्ला गल्फ २०१९” आगामी शनिबार आयोजना गर्न गईरहेको छ । यो लक्ष्मी बैंकले २०१४ देखि गर्दै आएको बार्षिक प्रतियोगिताको छैटौँ संस्करण हो । जुन नेपालको एक प्रमुख एमेच्योर गल्फ प्रतियोगिता हुन पुगेको छ। यो प्रतियोगिता स्ट्यान्डफोर्ड फम्र्याटमा ३/४...
तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिँदै नागरिक एप, ६ महिनाभित्रै ८० वटा नयाँ सेवा थप
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा स्थगित